Zibongwe ngamavawusha ka-R5000 izikole ezenze kahle eMajuba | Eyethu News
Zibongwe ngamavawusha ka-R5000 izikole ezenze kahle eMajuba
“Lezikole yizona ezibenemiphumela emihle ekubeni zisezindaweni ezingamakhaya.”
Othisha, abafundi, imenenja yaseCheckers uMnuz Akesh Ragunanan kanye nomeya uDkt Musa Ngubane bephakamise iminwe ekhomba ukuthi isifunda saseMajuba sihamba phambili emiphumelweni kamatikuletsheni. Othisha nabafundi bathathwe bephethe amavawusha abo abaxhaswe ngawo yiCheckers.
Kume ukusebenza esitolo sokudla iCheckers esisenxanxatheleni yezitolo zaseMajuba (Amajuba Mall), ngesikhathi kuzoxhaswa izikole ezintathu ngamavawusha esamba semali esingu-R5000 isikole ngasinye.
Loluhlelo beluholwa nguMeya womkhandlu waseMajuba uDkt Musa Ngubane kanye nethimba lezimenenja zakhona eCheckers.
Bebezifikela mathupha othisha kanye nabafundi bezikole okubalwa kuzo Ingcaka Combine School ephase ngo-100%, iPhathakahle High School ephase ngo-100% kanye neKhethukuthula High School ephase ngo-87%.
“Lezikole ezibalwe ngenhla yizona ezibenemiphumela emihle ekubeni zisezindaweni ezingamakhaya. Ngaphezu kwalokho nezinsizakusebenza abanazo ezikoleni azanele ngendlela okuyiyo kwezinye izikole. Lezizikole zikhombisile ukuthi zinothisha kanye nabafundi abasebenza ngokukhulu ukuzimisela kanye nangokubambisana ngoba benenhlosos yokuphakamisa ifulege lesikole sabo,” kusho umeya uDkt Ngubane.
Uqhube wathi yingakho kuvele abaxhasi besitolo iCheckers beza namavawusha ukusiza ekutheni abafundi bathengelwe izidingo abanazo ngaphakathi emagcekeni esikole.
“Lamavawusha angeke athenge ukudla, kodwa azobhekana ngqo nezidingo ngqangi zabafundi. Loluxhaso luphonsela inselelo bonke abafundi kanye nothisha ukuthi baqhubeke nokusebenza ngokuzimisela ukuze bezogcina iMajuba inemiphumela kamatikuletsheni emihle minyaka yonke. Siyabonga kubaxhasi bamavawusha okuyisitolo iCheckers ngalokhu abasenzele kona singabafundi basezikoleni ezikhona esifundeni saseMajuba. Siyathembisa ukuthi umgodi ovulwe ngabafundi bangonyaka ka-2016, uzogqitshwa ngabafundi abenza umatikuletsheni kulonyaka ka-2017 ngamaphesenti aphezulu kuno-77% lo abawutholile kulonyaka odlule,” kusho umfundi wasePhathakahle High School.
Lamazwi ashayele elikhulu ihlombe kushiwo kona ukuthi bazimisele abafundi bangonyaka ka-2017.
UMnuz Akesh Ragunanan oyimenenja yaseCheckers, uthe bahlulekile ukugodla abanakho lapho bebona imiphumela emihle ekhishwe ngabafundi baseMajuba ngonyaka odlule. Uqhube wathi yingakho bekhiphe lamavawusha azosetshenziswa khona ngaphakathi esitolo saseCheckers uma kukhona abakudingayo ezikolweni zabo. Ubuye wathi nangonyaka ozayo basazoqhubeka nalomklamo ngoba benenhloso yokukhuthaza imfundo.
Ungqongqoshe ududuze umndeni wekhansela